अञ्जु पन्तले अष्ट्रेलियामा आएर मुख खोलिन्–विवाहको योजनामा छु - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १९ मंसिर २०७३, आईतवार ०४:१९ |
मेलबर्न । झन्डै ६ वर्षअघि डिर्भोस गरेकी अञ्जु पन्त अझै सिंगल नै छिन् । के उनलाई यसबीचमा कुनै प्रस्ताव नआएर हो ? कि उनी अब आजीवन सिंगल नै रहनेछिन् ? अञ्जु पन्तका शुभेच्छुकहरुको मनमा उठिरहने प्रश्न हो यो ।
हाल अष्ट्रेलियामा सांगीतिक भ्रमणका क्रममा रहेकी अञ्जुले यी प्रश्नहरुको जवाफ कान्तिपुर दैनिक मार्फत दिएकी छिन् । यहाँका नेपाली सञ्चारकर्मीसँग अञ्जुले भनिन्–यो बीचमा मलाई विवाहको प्रस्ताव नआएको होइन । राजनीतिज्ञ, व्यवसायीदेखि सामान्य व्यक्तिहरूले समेत प्रस्ताव राखे । तर मेरो मुख्य प्राथमिकता विवाह गर्ने होइन । त्यसैले ती प्रस्ताव स्वीकार्य भएन ।
त्यसो त विवाहप्रति उनी पूरै नेगेटिभ पनि छैनन् । त्यसैले भनेजस्तो र मनले खाएको मान्छे भेटिए उनी अब सोच्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पुगेकी छन् । किनकि एकल महिलालाई समाजमा जीवन जिउन साह्रै सहज नहुने अनुभव उनको छ । भन्छिन् ‘संसारमा मायाप्रेमबाहेक केही पनि स्थिर र दिगो छैन । ’
दुई दशकदेखि संगीतमा लागेकी उनले थुप्रै उचारचढाव भोगिसकेकी छन् भने प्रायः सबै हस्तीहरूसँग काम गरिसकेकी छन् । तर उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी आफनै गीतहरूलाई मानिछन् । भन्छिन् ‘आफ्नै गीतहरूसँग आफूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।’ सांगीतिक कार्यक्रमका लागि ३० वटा बढी देश पुगिसकेकी उनले त्यहाँ पाएको माया र सम्मान अविस्मरणीय भएको सुनाइन् । अञ्जुलाई निराश, विछोड र भावनामा बगेका गीतहरू मात्र गाउने गायिका भन्दा चित्त दुख्छ । ‘मैले भर्सटाइल गीतहरू गाएकी छु,’ उनले सुनाइन् । पछिल्लो समयमा ‘सुर्के थैली…’, ‘छुकछुक रेल…’, ‘मैले तिमीलाई मन पराएको…’ लगायतका थुप्रै गीत गाएको बताइन् । मेरा गीतहरू विछोड र मायाप्रेमका मात्र छैनन् म समयसापेक्ष र सबैलाई मन पर्ने गीतहरू गाइरहेकी छु ।
नेपाली संगीत क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति आफूले पनि भोगेको उनी दाबी गर्छिन् । अर्काेतिर पछिल्लो समयमा आइरहेका नयाँ पुस्ताप्रति उनी धेरै आशावादी छिन् । जहाँ पुगे पनि र जे भए पनि घमण्ड नगर्न सुझावसमेत दिन्छिन् उनी ।
अष्ट्रेलियाको ब्रिसबन र सिड्नीमा कार्यक्रम गर्न आइपुगेकी अञ्जुले नेपाली गीतसंगीतमा अहिले व्यस्त हुनुपरे पनि अब समय निकालेर गरिब तथा पिछडिएका वर्गहरूको हितमा काम गर्ने सोच सुनाइन् । आफूले मुख्य गरेर महिला तथा बालबालिकाको हितमा काम गर्ने योजना रहेको समेत बताईन् ।
Previousसन्दर्भ २६ औं स्मृति दिवस : ‘के नारायणगोपाल ट्यापे थिए ?’
Nextडा.गोविन्द केसी र सरकारबीच दश बूँदे सहमति
१० मंसिर २०७५, सोमबार ०७:०१